ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ကြုံခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်တခုပါ။ အောက်တိုဘာလ ကုန်ခါနီးမှာ အိမ် ခဏပြန်သွားပါတယ်။ Nov ၂ ရက်နေ့ မှာ ရန်ကုန်ကနေပြန်လာတဲ့ အခါမှာ ………ရန်ကုန်လေဆိပ်ရဲ့ Immegration Counter အရောက်မှာ Passport စာအုပ်နှင့် စာရွက်စာတမ်းများပြသောအခါ….. တာဝန်ကျ Immegration ၀န်ထမ်းက D-Form တောင်းပါတယ်။ D-Form ပြရာ ဘဏ်ချလံ စာရွက်တောင်းရာ မလိုအပ်ဘူးထင်ပြီး မယူလာခဲ့ ပါဟုပြောရာ ထိုဝန်ထမ်းမှ လိုတာပေါ့ ။ ပြန်ယူရန် အချိန်လဲ မရှိတော့ပါ။
« Guestbook Album !
Happy New Year 2008 ! »
LIN LET KYAL SIN (12:17:00) : ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုး ကျွန်မ ဦးလေးလည်း ထပ်တူဖြစ်ဖူးတယ် .. ။ သူလည်း ကံကောင်းလို့ ပြန်လာလို့ရတာတဲ့ ။ အင်မီဂရေးရှင်းက ဒုက္ခပေးလိုက်တာပေါ့ .. ။ သူအလှည့်တုန်းကတော့ ပိုက်ဆံတွေအများကြီးပေးလိုက်ရတယ် .. ။ အဲဒါသာစဉ်းစားကြည့်တော့ .. ။